Ndị a na-eleghara anya na-eto eto Zaandam ọzọ a Nsogbu, Reaction, Ngwọta akụkọ? : Martin Vrijland
Ndị a na-eleghara anya na-eto eto Zaandam ọzọ a Nsogbu, Reaction, Ngwọta akụkọ?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 7 Ka 2019	• 5 Comments
Ị gụwokwa ya n'ụbọchị ndị na-adịbeghị anya? Akụkọ a chịkọtara na cop Tom Verweij gara akụkọ na Zaandam bụ ebe ụmụ nwoke abụọ chọtara n'otu ụlọ na Zaandam, ọ na-ejikwa aka ya amanye ọnụ ụzọ ahụ. Ụmụ okoro ahụ ga-achọ agụụ na-egbu egbu, ha ewee mechie ọnụ ụlọ ahụ ka ha ghara ịga n'èzí. Otu n'ime ụmụ nwoke ahụ ji mma dị n'azụ windo ahụ. Dị nnọọ ịrịba ama (lee vidiyo nke njikwa ihe ọmụma Jeroen Pauw n'okpuru), ma ọzọ anyị enweghị ike ịlele ya ma ọ bụrụ na ị banye na mkparịta ụka na mgbasa ozi, ị nwere ike ịsị na e nwere 'profaịlụ mgbasa ozi mmadụ' na-azaghachi na aka nri ọzọ "Ndị mmadụ" bụ ndị na-ekwu na ha maara ndị agbata obi na ndị dị otú ahụ.
Ugbu a, anyị nwere ike ikwu na ọ na-esiri gị ike ịlele profaịlụ mgbasa ozi ọha na eze na ebe GDR dị na Inoffizieller Mitarbeiter onye nyochaa ndị agbata obi ha, ugbu a ị na-ahụ ndị ọrụ na-enweghị ọrụ na weebụ iji chebe akụkọ. Ị chọrọ ịma mmetụta m banyere ikpe a?
Maka edeputara: Naanị m na-ekwupụta echiche m. Karịsịa, ịkwesịrị ịnakwere ya dị ka eziokwu, ma ọ bụrụ na m ekwe ka ihe ngosi ahụ nke mgbasa ozi na-ese maka obere oge, enweghị m ike izere echiche na nke a bụ maka ịkpọ ndị mmadụ ka ha nwee ike ịmebata iwu ọhụrụ. O nwere ike ịbụ na ị maara na Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta ọnụ ọgụgụ, nke nsogbu mgbasaozi na-agbasawanye nke mgbasa ozi na-eburu gị n'uche. Ihe nzaghachi gi aghagh i na-eme ka i nwee obi ut o na mmet uta di ukwuu. Ndi oru mgbasaozi bu ihe omuma na nke a (ya mere ndi mmadu di ka Matthijs van Nieuwkerk na Jeroen Pauw ma obu?). Ihe niile ị na-anụ ma hụ ga-abụ eziokwu, n'ihi na ha na-ewetara gị site na ihe oyiyi na "ihe akaebe". Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na a pụrụ ịmepụta ihe ngosi na onyinyo a site na usoro Hollywood na ngwọta ngwanrọ dị anya-ịchọta na mkparịta ụka. Site na nkọwa, anyi chere na mgbasa ozi agaghị eme ihe dị otú a ma mee ka ozi ọma ma bụrụ eziokwu. Otú ọ dị, echere m na n'ọnọdụ a, anyị na-egwuri egwu na a ngwọta site na ịpị. O nwere ike ịbụ na a na-ejikọ akụkọ na ọnọdụ anyị?
Kedu ihe ga-eme ngwọta mgbe ahụ ga-abụ na nke a? Kedu ihe ị chere banyere ndị na-elekọta ezinụlọ na-enye ikike iwu iji wakpo ụlọ ọ bụla na ezinụlọ maka nyocha na itinye aka, n'enweghị akwụkwọ ọchụchọ ma ọ bụ ikpe ụlọikpe? Ọ gaghị adịrị mma ma ọ bụrụ na ndị uweojii na-enyocha obodo nwere ike igbochi ezinụlọ ọ bụla? Mba, n'ezie nke ahụ agaghị adị mma, ma ị ga-enwe obi ụtọ na nke ahụ ozugbo ịnụrụ akụkọ banyere Tom Verweij.
Naanị ihe atụ. Ka e were ya na ị kwetaghị iwu iwu ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla ị ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ na ị nwere echiche ndị ọzọ gbasara ịzụlite karịa obodo ahụ na-eche na ị ga-enwe (dịka ọmụmaatụ banyere ihe gbasara nwoke na nwanyị na-ekpebi ụdị nwoke ma ọ bụ nwanyi na-ahọrọ karịa okike okike nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ) na ịchọrọ ịkụziri nwata gị iche. Ọ bụrụ na e mere iwu ọhụrụ ka ndị na-elekọta ezinụlọ chọpụta na ị naghị agbaso ụkpụrụ nduzi nke steeti, onye ọrụ nke obodo nwere ike ịbanye n'ụlọ gị n'ihi na ị (dịka ụkpụrụ ntụziaka) si eleghara nwa gị anya. Ana m ezigara ụyọkọ okooko osisi Jeroen Pauw dịka ekele maka inye aka nye m ka m debe ya Ngwọta. Ọfọn, ma eleghị anya, enwere m ezigbo ihe ọjọọ ma ọ bụ na ọ dị mma. "Nso akwa ukpụhọde ke emi ekedi ntem! Bah!"
Ị ma onye na-anaghị anabata n'ụlọ, ma ụbọchị niile na mgbasa ozi mgbasa ozi? Inoffizieller Mitarbeiter?
Nnyocha mba e mere na mgbasa ozi, gịnị ka nke ahụ na-egosi?
Tags: gị n'ụlọnga, agba, Jeroen, ụmụ nwoke, ụmụ, Ebube, Tom, eleghara anya, Verweij, Zaandam
7 May 2019 na 18: 06
... ugbua ọnwa ole na ole?
7 May 2019 na 20: 23
Na-agbalị ịkwụsị mmetụta uche ebe a kwa. Mgbe ahụ, ndị mmadụ na-akwụsịkarị iche echiche.
7 May 2019 na 20: 37
Odi egwu otu ihe omume (obuna ma obu na obu eziokwu) bu ugbua. Akwụkwọ akụkọ Belgium https://www.hln.be/nieuws/buitenland/opgesloten-verwilderde-nederlandse-jongetjes-nu-in-goede-handen~a2952a9d/?utm_medium=rss&utm_content=Nieuws
Akụkọ nke mmetụta uche ...
7 May 2019 na 22: 04
Echere m na ọ ga-adị mma ịkpọ abụ banyere 'nsogbu, mmeghachi omume, ngwọta' ..
Mbụ ndekọ nke egwu. Ndị fọdụrụ ga-agbaso.
Akụkụ mbụ nke ederede na nke a:
Ị na-ele akụkọ ahụ ma na-anụ akụkọ nke ihe oyiyi kachasị mma. Ị na-awụ akpata oyi n'ahụ, ị ​​hụla ihe akaebe. Ndị na-ede akụkọ gburugburu iji gosi ya niile. Amaghi usoro ha nwere ike iji mee ka ndi mmadu mara ihe di omimi. Ịmaghị ihe gbasara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihu na ihu n'ihu. Ị na-eloda ya niile ma ọ bụrụ na ị na-emetụ gị n'obi, ị ga-ama jijiji. Ihe ị na-apụghị ịhụ bụ na ị nweghị ike ịtụkwasị obi na ị bụ anya ọzọ. I kwesịrị ịma na ọ bụ naanị ..
7 May 2019 na 23: 04
Hey, ọ bụ ndị uweojii na Tom n'onwe ya na-ekwu na mbido na "ha" na-abanye, ihe niile na-egosi na nwoke nwere boris-crook chepụtara ihe mgbochi abụọ ma jiri obi ya mụta ihe na-ezighị ezi
nwere, dị nnọọ na-eme Tommie Verwijf, ị ga-esi ebe ahụ ... ga-adị mma mgbe ahụ i nwekwara ike itinye aka na FVD
Ụmụ okorobịa, gịnị mere i ji eyi iko ndị ahụ?
Hey ihere, ihere nke shit si n'anya gị adịghị eme ihere Pauwtje, Matthijs emeelarị ihere na ọ na-arụ ọrụ ya, mgbe ị ka nọ, ị ga-abụ otu mgbochi otu ụbọchị.
egosi n'ezie ihe maka ndị agbata obi gị n'ihi na ha ga-akwatu gị mgbe ha ghọtara egwuregwu egwuregwu gị, tụlee ya.
Ọ dịghị mgbe oge
Pauw maara na e meela ihe nile
" Julie van Espen, Onye Belgium Belgium Anne Faber na onye ogbugbu bụ Steve B. onye Belgium Michael P. na PsyOp kachasị ọhụrụ?
Martin Vrijland ọ na-achịkwa mmegide? Mba: Gụọ ebe a ọ bụghị ya! »
Nleta nile: 12.933.344
Marcos op Onye na-ahụ maka mpụga mbipụta Margaret Klein Salamon: "Nzọụkwụ ọzọ bụ ime ka eziokwu ahụ dị adị"
Martin Vrijland op Onye na-ahụ maka mpụga mbipụta Margaret Klein Salamon: "Nzọụkwụ ọzọ bụ ime ka eziokwu ahụ dị adị"